Trump oo ammaanay Madaxweyne Muslim ah - Waadinews | Somali News and Entertainments
Trump oo ammaanay Madaxweyne Muslim ah
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay madaxweynaha Masar Cabdel Fataax Al-Sisi isla markaasna sheegay inuu qabtay shaqo weyn inkasta oo Sisi la sheegay in loo heysto inuu geystay dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Madaxweynaha Masar ayaa lagu soo dhaweeyay aqalka cad ee Mareykanka xilli la filayo in Masar ay ka dhacdo afti wax looga baddalayo dastuurka gaar ahaan qodobka u ogolaan karo inuu xilka sii heyn karo muddo 15 sanno oo kale.
Ha’yadaha u doodo xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqay madaxweyne Trump inuu ka laabto taageeridda in Sisi uu mar kale xilka qabto. Trump ayaa ku tilmaamay madaxweynaha Masar inuu yahay ‘saaxib dhaw’. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku ammaanay kaalinta ay Masar ka qaadatay la dagaalanka argagixisada. BBC
Related Topics:Abdilfataha AsiisiArgagaxisoMaraykanMasarTrump